आगोको भुंग्रोमा एमाले : तेस्राे धार र पुर्वमाअेावादीकाे अलग माेर्चा - Sankalpa Khabar
आगोको भुंग्रोमा एमाले : तेस्राे धार र पुर्वमाअेावादीकाे अलग माेर्चा
१६ आश्विन ०९:५३
काठमाण्डौं । माधव नेपालले पार्टी छाडेर गएपछि एक पटक केपी ओलीले भनेका थिए–पिलो निचोरियो तर खिल वाँकी रहयो । पिलोको पिडा जसले वुझेको छ–उसले यो निचोरिदा कति सञ्चो हुन्छ भन्ने वुझदछन । तर,यसको खिल जब वाँकी रहन्छ भने पिलो निको हुदैन ।
केपी ओलीले पिलो कसलाइ र खिल कसलाइ भनेका हुन–त्यो उनै जानुन । तर,कुरा सफा छ–उनले माधव नेपाल र उनको समुहलाइ राम्रो नजरले हेरेका भने थिएनन । पार्टी छाडेर नेपाल गइसकेपछि केपीले गद्धार सम्म भनिसकेकोले माधवलाइ नै ओलीले पिलो भनेको वुझन सकिन्छ । तर,खिल कसलाइ भनेका हुन ? यो अनुत्तरित छ ।
अघिल्लो शुक्रवार देखि चलेको नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको वैठक आइतवारसम्म चल्यो । यसपछि गत शुक्रवार अर्थात असोज १५ गते देखि विधानमहाधिवेशनमा उ पसिसकेका छ । केन्द्रिय समितिको वैठक नै शुक्रवार र शनिवार जति शीतल थियो आइतवार भयंकर उष्ण भयो । आइतवारको वैठकमा नेताहरुले वोलिसकेका थिए तर जब भीम रावल र घनश्याम भुषालले वोले–तव मौसम र वातावरण अचानक बदलियो । यहि दशा विधान महाधिवेशनमा पनि देखिइसकेको छ । रावललाइ अध्यक्षमण्डलमा नै राखिएन । यसपछि शुक्रवार राती उनले कविता माफर्त मनको वह पोखेका छन भने केन्द्रिय समितिमा चर्को आवाज निकालेका घनश्याम भुषालले टिवट गरेका छन । उनले भनेका छन–एमालेमा सामुहिकता हरायो ।
एमाले केन्द्रिय समितिमा संसद विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने वहश छेडियो । नेताहरुले केपी ओलीलाइ प्रतिगामी भनेनन तर वाकी शब्द सवै प्रहार भएका छन । अब यो विषय विधान महाधिवेशनसम्म पुग्न थालेको छ ।
नेकपा एमालेमा अघि भने झैं को पिलो र को खिल भन्ने वहश अब फेरि हुनेछ । यदि माधव नेपाल खिल हुन भने भुषाल र उनका अन्य साथीहरु खिल हुन भन्ने सहज वुझन सकिन्छ । र,ओलीले यस्तो दुर्वचन किन वोलेछन भन्ने रावल र भुषालका पछिल्ला अभिब्यक्ति हेर्दा सहजै वुझन सकिन्छ । अर्थात,ओलीको विरोध गर्ने माधव त गए तर उनलाइ आच्छु आच्छु पार्ने भीम रावल र घनश्याम भुषालहरु भने एमालेमा अझै छन ।
खासमा नेकपा एमालेमा अविश्वासको जुन धर्को तानिकाएको थियो त्यो यथावत छ । एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपाललाइ जुन दृष्टिले हेर्छ भीम रावल देखि घनश्याम भुषालसम्मलाइ पनि सोही नजरले हेर्दछ । कुरा यति हो कि माधवले नयाँ दल वनाए र भीम रावलहरु त्यसमा गएनन । एमाले पंक्तिको यो वुझाइकै कारण भीम रावल देखि घनश्याम भुषाल,युवराज ज्ञवाली देखि अष्टलक्ष्मी शाक्यसम्म खास जिम्मेवारी एमालेमा पाएका छैनन । अहिलेको विवाद हेर्दा उनीहरुले लामो समय मुल जिम्मेवारी पाउने पनि देखिन्न ।
नेकपा एमालेमा देखिएको यो नयाँ रडाकोले अब हांगा हाल्दैछ । कारण–रावल र भुषाल मात्र होइन,त्यहाँ पुर्वमाओवादी खेमा पनि छ,जो मौकाको ताकमा छ । अहिले नै प्रभु साहले आगो ओकल्न थालिसकेका छन र पार्टी वैठक देखि विधान महाधिवेशनसम्म उनी सहभागी छैनन । यो सानो विद्रोह होइन । यदि रामवहादुर थापा वादलको ठाउमा अर्को कोही नेता हुन्थ्यो भने पुर्वमाओवादी समुहले यतिवेला आगोको झिल्का निकालिसक्थ्यो । एमालेको विवादमा पुर्वमाओवादी पनि मिसिएपछि अवस्था के हुन्छ ? यसैले ओलीले पिलो निचोरियो खिल वाँकी छ भनेका हुन ।
एमालेमा विवादको वल्ल उठान भएको छ । जब भीम रावलदेखि घनश्यामले केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु गलत हो भनेका छन भने स्वभाविक छ केपी ओली पक्षले पनि अब विस्तारै दस भाइ नेताले माधव नेपालको पछि लागेर पार्टीको सरकार ढालेको,समानान्तर कमिटी वनाएको कुरा उठाउनेछ । यसरी तेस्रो धारका नेतासंग ओलीपक्ष अब विधान सम्मेलन देखि महाधिवेशनसम्म नै भिडनेछ । र,खास भिडन्त त्यतिवेला हुनेछ जब केपी ओलीले पुन महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुन खोज्नेछन । अघिल्लो महाधिवेशनमा नै ओलीले एक पटकको लागि अध्यक्ष र एकपटको लागि प्रधानमन्त्री भनेका थिए । यो वुदालाइ तेस्रो धारले समात्नेछ ।
अब एमालेका सबै पार्टी गतिविधि तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानबाटै, भयाे…
७ कार्तिक १४:१७